Thoroughbred Horses, ny karazany teraka mifandraika amin'ny hazakazaka | Soavaly Noti
Ny karazana soavaly Thoroughbred
Soavaly Thoroughbred karazany izy ireo novolavolaina tamin'ny England ao amin'ny taonjato XVIII. Marina fa, indraindray, ny anarana hoe "bredbred" dia ampiasaina hiresaka momba ny soavaly razana, ireo izay tsy misy karazana hazo fijaliana miaraka amin'ny karazany hafa amin'ny razany.
Tena mitovy fitoviana izy ireo sarobidy ary miasa amin'ny tontolon'ny hazakazaka soavaly satria miavaka amin'ny hafainganam-pandehany, ny hakingany ary ny fanahiny. Na dia nompiana tamin'ny hazakazaka aza izy ireo dia izy ireo ihany koa azo ampiasaina amin'ny karazana fanatanjahan-tena hafa mitovy noho ny toetran'ny atleta.
Betsaka ny mpihazakazaka Thoroughbred izay nidina tamin'ny tantara rehefa nandeha ny fotoana. Ohatra tsara amin'izany: Seabiscuit fa tamin'ny 1937 dia azony ny satro-boninahitra Triple; ruffian, izay hatramin'ny taona 70 dia noheverina ho filozofa tsara indrindra teo amin'ny tantara noho ny hafainganam-pandehany ary ny hahavony 170 cm. Ary raha mijery fotoana ankehitriny kokoa isika dia afaka miresaka Frankel fa talohan'ny nialàny tamin'ny 2012 dia nandresy tamin'ny hazakazaka 14 natolony.
Nandritra ny taona maro dia nitombo ny anaran'ireo soavaly Thoroughbred izay tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpandresy. Misaotra an'ireo toetra ireo izay ankasitrahana indrindra amin'ny karazany.
Thoroughbred Soavaly matetika dia manana hahavony eo anelanelan'ny 155 cm sy 180 cm ary milanja manodidina ny 500 kg. Araka ny hitanao izao ny fiovan'ny habe dia mety hisy dikany manomboka amin'ny Thoroughbreds sasany ka hatramin'ny hafa, mety tsy mitovy ihany koa izy ireo na amin'ny endrika ivelany aza. Naneho hevitra izahay tany am-piandohana fa manana habe 170 cm i Ruffian, ohatra. Izany dia satria ny fiaviana dia tsy miafara amin'ny fananana fenitra manokana. Mazava ho azy fa matetika ny vatan'izy ireo mizara tsara ary tsara tarehy raha jerena, kanto
Ny soavaly an'ity karazana ity dia nompiana mba hihazakazaka miaraka amin'ny lasely. Araka ny halavany sy ny fatin'izy ireo dia ampiofanina izy ireo amin'ny karazam-pirazanana samihafa, na dia matetika aza misy predilection ho an'ny avo kokoa. Ohatra, ny santionany fohy sy be hozatra dia mety kokoa amin'ny halaviran-davitra (sprinters), raha biby lehibe kokoa manana tongotra lava kokoa kosa mazàna ampiasaina amin'ny halavirana lava (mihoatra ny iray kilaometatra). Na dia marina aza fa zava-dehibe ihany koa ny hahafantarana hoe iza avy ireo sehatra tsara kokoa.
Noho izany io soavaly soavaly io dia azo zaraina sprinters na mpihazakazaka lavitra y soavaly ahitra na soavaly fasika.
Raha mbola foal izy ireo, ny manam-pahaizana sasany dia afaka mandinika ny fahaizany miorina amin'ny endrika ny tongony, ny fomba fandehany, ny morfolojian'ny ankapobeny ary ny faharanitan-tsainy.
Rehefa herintaona ny equines dia manomboka ny fampiofanana azy ireo. Ny fotoana an'ny fampisehoana ambony kokoa amin'ireo equines ireo no hita eo anelanelan'ny taona 3 sy 5 taona. Tsy midika izany fa ny mahazatra, efa nisy ary misy ny tranga izay anombohany ny asany amin'ny tontolon'ny hazakazaka aorian'ny roa taona na hamarana izany aorian'ny 10.
Andao hiresaka kely momba ny toetra mampiavaka azy ireo, na dia eo aza ny fiheverana fa afaka manana fahasamihafana maro izy ireo amin'ny santionany iray amin'ilay karazany. Manana a vatana lava sy mahia, mombamomba mahitsy, misy a voa mafy be izay manome hery lehibe ao anaty gal.
Ny lohany dia toa mailo hatrany noho ny halavany. Mifarana amin'ny valanoranomaso somary gaunt sy vitsivitsy izy io vavorona lehibe ao anaty orona mamela oxygenation haingana zavatra izay manome tombony mitovy amin'ny natokana ho an'ny fanatanjahantena.
ny rantsambatana ny lava sy mahery raha ny anoloana mazàna kokoa izy ireo mahia sy fohy.
Amin'ny volony Thoroughbred dia landy sy fohy izy io. ny sosona ny Loko volontsôkôlà, na izany aza afaka manomeza sosona hafa toa anao la helodrano, la grey na ny voa. Ny tarehy sy ny tendrony dia mety misy teboka fotsy, na izany aza, volo fotsy dia tsy dia miseho amin'ny vatana sisa.
Ny toetra amam-panahy dia zavatra mampiavaka an'io karazana Equine io ary mahazatra azy ireo matetika izany soavaly tena manan-tsaina, mitaintaina, mavitrika ary mora tohina. Izany dia ilaina ny fananana tanana manokana rehefa manangana sy mampiofana azy ireo.
Teo anelanelan'ny taona 1683 sy 1728, tany Angletera, nanomboka ny mpiompy hiampita mares anglisy miaraka amina soavaly soavaly telo nafarana avy any Moyen Orient ary manana fahaiza-manao hazakazaka lavitra dia lavitra: Darley Arabian, Byerley Turk ary Godolphin Arabo. Ny soavaly Thoroughbred maoderina rehetra dia avy amin'ny iray amin'ireo soavaly telo ireo, izay ny ampahany voalohany amin'ny anarana dia manondro ny tompony ary ny tapany faharoa amin'ny karazany misy ilay biby. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra dia misy fandalinana fototarazo naneho an'io ny ankamaroan'ny mitovy amin'ny karazany, manodidina ny 95%, manokana niavian'i Darley Arabian.
Ireo lakroa ireo nitady izay hahazoana ilay hazakaza-tsoavaly tsara indrindra azo atao izy ireo. Ny hazakaza-tsoavaly dia fomban-drazana any Angletera izay araka ny fanadihadiana sasany dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Mihevitra ve izy ireo fa nahatratra ny tanjony? Eny ary ary maro hafa.
Nampahery ny zaza ny tontolon'ny filokana. Tamin'ny taona 1868 dia nisy patanty momba ny hazakaza-tsoavaly nopotserina, ilay rafitra mbola ampiasaina ankehitriny
Ny UK Jockey Club dia mitazona firaketana an-tsoratra, ny biby voasoratra anarana voalohany tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Inona koa isaky ny fifaninanana dia voasoratra ao amin'ny boky stud ny Thoroughbred Horse an'ny firenena nahaterahany.
Teo anelanelan'ny taona 1900 sy 1930, ny fiompiana Thoroughbred nitsambikina ny puddle ary nanomboka nitranga tany Amerika, izay toerana nandraisana ny tontolon'ny hazakaza-tsoavaly.
Amin'izao fotoana izao ny fiompiana sy ny fisafidianana soavaly Thoroughbred dia tena henjana tokoa hahazoana kofehy amina kalitao tena tsara izay mety hahatratra ny sandan'ny an'aliny euro.
Herintaona dia azon'izy ireo atao omby eo amin'ny 35.000 eo ho eo no teraka amin'ity karazany eto amin'izao tontolo izao ity, misongadina indrindra any California, Florida ary Kentucky.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Ny karazana soavaly Thoroughbred
Soavaly trakehner, mampiavaka ny karazany kanto indrindra
Pío na pinto, ilay soavaly mitafy palitao